Xildhibaannada BF war ka soo saaray xariga Roobow - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaannada BF war ka soo saaray xariga Roobow
Xildhibaannada BF war ka soo saaray xariga Roobow
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xariga maanta loo geystay Sheikh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha Koofur Galbeed.
Qoraal kasoo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa waxay si cad u sheegay inay ka xun yihiin xariga loo geystay Mukhtaar Roobow oo kamid ahaa musharixiintii ugu horeysay ee is diiwaan geliyay.
Ka sokow inay cambaareeyeen xariga waxay sheegeen inay Midowga Africa u gudbin doonaan dacwad ka dhan ah doorka ciidamadooda ka jooga Baydhabo ay ku lahaayeen xariga Mukhtaar Roobow.
Dowladda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay inay Muqdisho u keentay Mukhtaar Roobow labo arin.
Hoos ka daawo qoraalka Xildhibaanada Baarlamaanka